🍅 အသားအရေအမျိုးအစား အားလုံး အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Remover 🍅 Ketchup Bubble Makeup Remover Tissue က အသားအရေကို ထိခိုက်မှု လုံးဝ မရှိစေမယ့် Formula နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပြီး Tissue မှာ ပါဝင်တဲ့ နူးညံ့တဲ့ အမြှုပ်လေးတွေက ဖျက်ရခက်တဲ့ ရေစိုခံမိတ်ကပ်တွေကိုပါ လွယ်ကူစွာ ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ FDA အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိပြီးဖြစ်လို့ Sensitive Skin တွေပါ စိတ်ချလက်ချ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ 🍅 Ketchup Bubble Makeup Cleaning Tissue 30 Sheets တစ်ထုပ် ၅၀၀၀ ကျပ် 🍅 Ketchup Bubble Makeup Cleaning Tissue 100 Sheets တစ်ထုပ် ၁၂၀၀၀ ကျပ်
Bubble လေးတွေနဲ့ ဖိပွတ်ဆွဲစရာမလိုတဲ့ Ketchup Bubble Makeup Cleaning Tissue ? အသားအရေကို ထိခိုက်မှု လုံးဝမရှိစေတဲ့ ဖော်မြူလာ နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပြီး Tissue မှာပါဝင်တဲ့ နူးညံ့တဲ့ အမြှုပ်လေးတွေက ဖျက်ရခက်တဲ့ ရေစိုခံ မိတ်ကပ်တွေကိုပါ အလွယ်တကူ ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ Made in Korea ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ FDA အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိထားတာဖြစ်လို့ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ? Ketchup Bubble Makeup Cleaning Tissue 30 Sheets တစ်ထုပ် ၅၀၀၀ ကျပ် ? Ketchup Bubble Makeup Cleaning Tissue 100 Sheets တစ်ထုပ် ၁၂၀၀၀ ကျပ်
Focus Beauty မှ ကိုးရီးယားနိုင်ငံတွင် ထုတ်လုပ် တင်သွင်းဖြန့်ချီသော ???Ketchup Bubble Makeup Remover Tissue???သည် မြန်မာနိုင်ငံ FDA မှ FDA No. MN200529979 ဖြင့် စစ်ဆေးခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့် စိတ်ချယုံကြည်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်.
Ketchup Makeup Remover Tissue အရွက် ၁၀၀ ပါအထုပ်ကြီးတစ်ထုပ်ကို ၁၂၀၀၀ ကျပ်နဲ့ ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ. အခြား Makeup Remover Tissue တွေနဲ့လုံး၀မတူတဲ့ Formula နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်. မျက်စိမစပ်တဲ့၊ အသားအရေကို ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိတဲ့၊ ပွတ်ဆွဲစရာမလိုတဲ့ Makeup Remover Tissue ကိုရှာနေရင်တော့ Ketchup Makeup Remover Tissue ကိုသာ ရွေးခြယ်လိုက်ပါ. လွယ်ကူအဆင်ပြေတဲ့ မိတ်ကပ်ဖျက်ခြင်း အတွေ့အကြုံ...
Focus Beauty ၏ ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ??Ketchup Brand?? မှ ပထမဆုံးစတင်မိတ်ဆက်ပေးမှာကတော့ Ketchup Bubble Makeup Remover Tissue ဖြစ်ပါတယ်. ???အသားအရေကို ထိခိုက်မှုလုံး၀မရှိစေမယ့် Formula နဲ့ထုတ်လုပ်ထားပြီး Tissue မှာပါ၀င်တဲ့ နူးညံ့တဲ့ အမြှုပ်လေးများက ဖျက်ရခက်တဲ့ ရေစိုခံမိတ်ကပ်တွေကိုပါ လွယ်ကူစွာ ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်. ???အသုံးပြုရာမှာ Tissue ကို မျက်နှာအရေပြားကို ဖိပြီး ပွတ်ဆွဲစရာမလိုပဲ အသာအရာ ပွတ်သပ်ပေးရုံနဲ့ မိတ်ကပ်များအားလုံးကို သန့်စင်စေပါတယ်. ဒါကြောင့် အရေပြားအရေးအကြောင်းဖြစ်လာမှာကို ပူစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့. ???ကိုးရီးယားနိုင်ငံ beau beau corp မှ Focus Beauty အတွက် ထုတ်လုပ်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်. ?Ketchup Bubble Makeup Remover Tissue? အရွက် ၁၀၀ ပါ အထုပ်ကြီးတစ်ထုပ်ကို ၁၂၀၀၀ ကျပ်. ?Ketchup Bubble Makeup Remover Tissue? အရွက် ၃၀ ပါအထုပ်သေးတစ်ထုပ်ကို ၅၀၀၀ ကျပ် ဖြင့် ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ.